စံနမူနာအနေဖြင့် ဘယ်လိုဦးဆောင်ကြမလဲ? | Mycanvas
ကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်ရှိခြင်းထက် ကြီးမြတ်သောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ရှိရန် ပို၍အရေးကြီးပါသည်။ သင့်အဖွဲ့မှ ရလဒ်များကို အမှန်တကယ် လိုချင်ပါက၊ သင်သည် သူတို့ထံတွင် အမူအကျင့်ကို စံနမူနာဖြင့် ဦးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သို့သော် ဝန်ထမ်းများသည် သင်၏သတိရှိရှိလုပ်ဆောင်မှုများကို အာရုံစိုက်ရုံသာမဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ။ သူတို့က သင့်ရဲ့အလေ့အထနဲ့ တခြားသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံတာကို သတိထားမိတယ်။
1. အပြုသဘောဆောင်သော Self-Talk ကိုလေ့ကျင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများ မည်သို့မည်ပုံ ပြီးပြည့်စုံနေပုံနှင့် ၎င်းတို့နောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှဝေးကွာနေပုံတို့ကို ပုံရိပ်များနှင့် ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် နေထိုင်ကျပါတယ်။ တကယ်တော့၊ ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ မိမိကိုယ်ကို ပြောဆိုတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မလုံလောက်မှုများအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်နေမည့်အစား ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်နေသောတိုးတက်မှုကို တန်ဖိုးထားတတ်ရန် အလေ့အကျင့်တစ်ခုပြုလုပ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝများနှင့် အခြားသူများ၏ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော လှည့်ကွက်များကို မနှိုင်းယှဉ်မိရန် မိမိကိုယ်ကို သတိပေးသင့်သည်။ ခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ အဆိုးဆုံးရန်သူအစား ၎င်းတို့၏ အကြီးကျယ်ဆုံး ရွှင်လန်းစေသော အလေ့အထဖြစ်အောင် လုပ်သင့်သည်။
2. ပရမ်းပတာကာလအတွင်း စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။
ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်များကို ပြဿနာမျယးကို ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့အသိပေးရန် လိုအပ်ပါတယ် — စက်ပျက်သည်၊ ကြီးကြီးမားမား အမှာစာ ပျက်သွားသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရိက္ခာများ အချိန်မီမလာဘူး၊ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် မမျှော်လင့်ဘဲ ပျက်ကွက်သွားပါသည်။ တည်ငြိမ်သောခေါင်းဆောင်သည် ဤသတင်းကိုရရှိသောအခါတွင် ငြိမ်သက်နေပြီး ပြုံးပင်နေတတ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှ ရှောင်လွှဲ၍မရသော၊ အမြဲမပြတ်ထင်ရသော ပြဿနာများသည် မီးငြိမ်းရုံမျှမက၊ ၎င်းတို့သည် လက်ငင်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် အနာဂတ်တွင် အဆိုပါပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် စနစ်သစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို တင်ပြပေးကာ လုပ်ငန်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်စေကြောင်း ပြသသည်။
3. ဝန်ထမ်းများအဆင့်အားလုံးနှင့် တက်ကြွစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။
မတူညီသော ဝန်ထမ်းများသည် ကုမ္ပဏီအား ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို မည်ကဲ့သို့ ရှုမြင်သည်ကိုသိရန် သူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထိပ်မှာထိုင်ပြီး လူတိုင်းက သင့်လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို သိရှိတယ်လို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ သင့်ဝန်ထမ်းများနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံပါ၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ရင်ဆိုင်ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို နားလည်ပါ။ တုံ့ပြန်ချက် မှန်မှန်ရယူခြင်းဖြင့် သင်သည် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မည့် အလုပ်အကြောင်းကို ခိုင်မာစွာ နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်း သေချာစေကာ၊ ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်များနှင့် ပျက်ကွက်နိုင်သည့် အလားအလာများကို သတိပြုမိပါသည်။
4. လူများဗဟိုပြုဖြစ်ခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါ။
ခေါင်းဆောင်အများစုဟာ အလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်ကိုလုပ်ပုံတွေကို အရေးစိုက်ကျပါတယ်။။ ခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ထားသည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ရုံးပတ်ဝန်းကျင်ကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့လူတွေအပေါ် အာရုံစိုက်လာတဲ့အခါ သူတို့သည်ကုမ္ပဏီအတွက် သူတို့တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။
5. ကျန်းမာသော အလုပ်-ဘဝ ချိန်ခွင်လျှာကို ဖန်တီးပါ။
ခေါင်းဆောင်များသည် မကြာခဏ “နား” ရန် မတတ်နိုင်ကြပေ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်ပတ်ရန် အချိန်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ခွန်အားများစွာလိုအပ်သော်လည်း၊ သင့်အတွက် အချိန်ကိုရှာဖွေရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အလုပ်-ဘဝ ဟန်ချက်ညီမှုသည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျှော်လင့်ချက်များအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်၏ဝန်ထမ်းများအား အလေးပေးပြောကြားရန် ကြိုးစားပါသည်။
6. သင့်အမှားများကို ဝန်ခံပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှားလုပ်မိ လုပ်မိတဲ့အခါ ဝန်ခံဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါက ဝန်ထမ်းတွေကို သူတို့ရဲ့အမှားတွေလုပ်မိဖို့ တွန်းအားပေးသလို အဲဒီအမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူဖို့လည်း အားပေးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများကို အရာများကိုကြိုးစားပြီး ကျရှုံးမှုများတွင် လုံခြုံသည်ဟု ခံစားမိစေရန်နှင့် ၎င်းတို့သည် ဘေးကင်းကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အမှားများအတွက် ညံ့ဖျင်းသောအကြည့်ခံရမည်မဟုတ်ကြောင်း ပေးသိစေပါ။